QYBZ mqengqeleki Tapered iibheringi iibheringi III
Iibheringi mqengqeleki Tapered iibheringi ngokwahlukana. Zombini izangqa zangaphakathi nezangaphandle zebhetri zinamacwecwe omdyarho. Olu hlobo lokuthwala lwahlulahlulwe lwaba ngumqolo omnye, umqolo ophindwe kabini kunye neebheroli ezine zeebheringi ezinamacala amane ngokwenani lemiqolo efakiweyo. Umqolo omnye iibheringi mqengqeleki tapered nga kuthwala umthwalo kobuso kunye ulwalathiso umthwalo umthwalo eyodwa. Xa ukuthwala kuthwala umthwalo we-radial, iya kuvelisa amandla e-axial, ngoko ke enye into enokuthwala amandla e-axial kwicala elichaseneyo iyafuneka ukulinganisa.
QYBZ Hub Ukuthwala I
Owona msebenzi uphambili wokuthwala ihabhu yeemoto kukuthwala umthwalo kunye nokubonelela ngesikhokelo esichanekileyo sokujikeleza kwehabhu yevili. Ayithwali kuphela umthwalo we-axial kodwa ikwathwala umthwalo weradial. Inxalenye ebaluleke kakhulu.
Ukuthwala ivili lemoto eliqhelekileyo lenziwe ziiseti ezimbini zeebheringi ezijikelezayo okanye iibheringi zebhola. Ukufakwa, ukuthambisa ioyile, ukutywina kunye nokucoca uhlengahlengiso lweebheringi kwenziwa kumgca wokuvelisa imoto.
Olu lwakhiwo lwenza ukuba kube nzima ukuhlangana kumzi mveliso weemoto, iindleko eziphezulu kunye nokuthembeka okungalunganga. Ngapha koko, xa imoto ikwindawo yokugcina, iibheringi kufuneka zicocwe, zifakwe ioyile zilungelelaniswe.
QYBZ iibheringi roller tapered I
Mqengqeleki Tapered ethwele olu hlobo lokuzala iqulathe isangqa yangaphakathi, umsesane ongaphandle kunye tapered element lothuli. Ngenxa yejiyometri yoyilo lwayo, iibheringi ezijikelezayo ezinokuthamba zinokumelana nemithwalo edityanisiweyo (i-axial kunye ne-radial). Ukongeza, uyilo luvumela ii-roller ukuba ziqhubeke nokuziqengqa nokuba zityibilika kwiileyili zeringi yangaphandle nangaphakathi.
I-engile yokunxibelelana kwe-tapered roller ethwele umendo wendlela eyahlukileyo, eyenza ukuba umlinganiso we-axial kunye ne-radial umthwalo ulungelelaniswe nakweyiphi na imeko; xa i-engile inyuka, inamandla amakhulu okuthwala i-axial.
QYBZ mqengqeleki Tapered iibheringi II
QYBZ Spherical mqengqeleki iibheringi I
Iizileyi ezingqukuva kwi-roller-self-aligning roller roller zilungiswe kakuhle. Ngenxa yokuba umjikelo wendlela yomdyarho wesangqa somdyarho ungqukuva, inento yokwenza nokuzilungelelanisa. Ingavumela i-shaft ukuba ithambeke, kwaye i-angle yokuthambekela evumelekileyo yi-0.5 ° ukuya kwi-2 ° kunye nomthamo womthwalo we-axial mkhulu kakhulu. Inokuthwala umthwalo we-radial ngelixa uthwele umthwalo we-axial. Ioyile yokuthambisa isetyenziswa ngokubanzi.
QYBZ Hub Ukunikela III
Ukuthwala ivili kukuthwala okukhethekileyo okusetyenzisiweyo kumavili eemoto, athwala ubunzima bayo yonke imoto, amandla okukhawulezisa, amandla okuncipha, amandla ajika ecaleni, kunye nokungcangcazela kunye nefuthe elibangelwa ziimeko zendlela. Ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthembeka ngexesha lokuqhawulwa kweebrake, iinkqubo ze-anti-lock braking (ABS) nazo ziyathandwa ngakumbi. Ke ngoko, imakethi inesidingo esandayo seyunithi yeevili ezinendawo yokuthwala enamavili angene ngaphakathi. Iibheringi zeevili zingahlulwahlulwa zibe ziindidi zokuqala, ezesibini nezesithathu ngokwesigaba sophuhliso lwazo.
QYBZ Hub Ukunikela II
Iibheringi zehabhu yevili zibalulekile kukuhamba kweemoto. Ihabhu ye-hub inoxanduva lokunciphisa ukunganyanzeleki xa isisu semoto siqhuba kwaye sigcina ukuqhuba okuqhelekileyo kwemoto. Ukuba ihabhu ethwele ukungaphumeleli, inokubangela ingxolo, ukufudumeza, njl., Ngakumbi ivili langaphambili licacile, kwaye kulula ukubangela izinto eziyingozi njengokulawula. Ke ngoko, iibheringi zehabhu kufuneka zigcinwe ngexesha.
QYBZ Deep Groove Ball Ukunikela III
Uluhlu isicelo iibheringi enzonzobila groove ebanzi kakhulu. Zilungele isantya esiphezulu kunye nesantya esiphezulu, ukuziqhelanisa nemithwalo ye-radial kunye ne-axial kumacala amabini, kwaye akukho mfuneko yokulondolozwa. Iibheringi enzonzobila emseleni ibhola zisetyenziswa ngokubanzi iintlobo ethwele. Iibheringi Okey zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, ezahlukeneyo kunye nobukhulu iibheringi ibhola groove enzulu.